विभेदमै उठेका दलित अगुवाको खुलासा : – GoodnewsKhabar
विभेदमै उठेका दलित अगुवाको खुलासा :
गाउँमा छोइछिटो हुन्छ, शहरले पाइला–पाइलामा सताउँछ’
गुडन्यूज खबर । २०७७ आश्विन १६, शुक्रबार १३:५२
शिक्षा र चेतनाको कमीले दूरदराजमा कथित दलित समुदायमाथि अहिले पनि जातीय हिंसा अचाक्ली छ । तर, तुलनात्मक रूपमा पढेलेखेका र चेतनशीलहरू बस्ने भनिएका शहरमा समेत शिक्षित र अगुवा दलितले समेत कहालिलाग्दो जातीय हिंसा खेपिरहेका छन् ।
नुनुता राई : खोज पत्रकारिता केन्द्र
डोटीमा जन्मिएकी दुर्गा सोब आईए पढ्न २०४३ सालमा काठमाडौं पसेकी थिइन् । काठमाडौं आउँदा उनलाई लागेको थियो– जातीय छुवाछूत र भेदभाव अचाक्ली रहेको सुदूरपश्चिममा जस्तो विभेद राजधानीमा नहोला । तर, सोचेजस्तो रहेनछ शहर । क्याम्पसमा हुने सरस्वती पूजादेखि पिकनिक, छात्रवृत्तिदेखि छात्रावासको पहुँचसम्ममा दुर्गाले डोटी र धनगढीमा भोगे जस्तै विभेद र जातीय हिंसा भोगिन् ।
आईए पढ्दापढ्दै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, एक्सन एडमा काम गर्न थालेकी दुर्गाको २०५१ सालमा अमेरिकी महिला अधिकारकर्मी एवं लेखक रोविन मोर्गनसँग भेट भयो । महिला अधिकारबारे आफ्ना ज्ञान बाँड्न नेपाल आएकी मोर्गनलाई भेटेपछि दुर्गाले भनिहालिन्, “यहाँको महिला आन्दोलनले सबैलाई समेटेको छैन । म महिलामा पनि सबैभन्दा पछि परेका दलित महिला अधिकारको क्षेत्रमा केही काम गर्न चाहन्छु ।”
दुर्गाको कुरा सुनेपछि मोर्गनले उनलाई संस्था खोल्न सुझाइन्, सहयोग जुटाइदिइन् । त्यसैपछि नै खुलेको हो दलित महिला संघ, जुन अहिले देशव्यापी बनेको छ । संस्था खोलेपछि दुर्गाले एउटा फ्ल्याट भाडामा लिइन्, दुई कोठामा अफिस राखिन्, सँगैका दुई कोठामा आफू बसिन् । संस्थाका गतिविधिबाट घरबेटीले दुर्गाको जात थाहा पाए । उनी विश्वकर्मा हुन् भन्ने थाहा पाएपछि माहोल एकाएक बिग्रियो । जात थाहा नपाएर कोठा दिएको भन्दै उनले तत्काल घर खाली गर्न भने ।
त्यसपछि दुर्गा जात नढाँटी कोठा खोज्न थालिन् । तर, परिचय खुलाउँदा झन् उल्टो भयो, धेरैले डेरा नै दिएनन् । “कतिपय घरबेटीले पानी बन्द गरिदिए, बत्तीसमेत काटेर दुःख दिए” दुर्गा सम्झिन्छिन्, “धेरैतिर सहयोग मागें, कतै मिलेन । अन्ततः जात लुकाएरै तीन महीनापछि कोठा पाएँ । काठमाडौंमा जातकै कारण मैले धेरै पटक डेरा सर्नुपरेको छ ।”
सन् १९९५ मा दुर्गा महिला अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन बेइजिङ पुगिन्, जहाँ नेपालबाट सयभन्दा बढी महिला सहभागी थिए । मोर्गनकै सिफारिशमा बेइजिङ पुगेकी उनलाई होटलमा नेपाली सहभागीसँग कोठा ‘सेयर’ गर्नुपर्ने भयो । तर, होटलको त्यो फ्ल्याटमा बस्ने कोही पनि नेपाली उनीसँग कोठा सेयर गर्न तयार भएनन् । काठमाडौंमा घरबेटीले निकाल्दाको भन्दा ठूलो पीडा उनलाई बेइजिङमा भयो । दुर्गा भन्छिन्, “त्यो मेरो जीवनकै दुःखद क्षण थियो, म बेस्सरी रोएँ ।”
दलित महिला संघकी संस्थापक २०५८ मा स्थापना भएको राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्य सचिव पनि भइन् । तर, उनीमाथि हुने लैंगिक र जातीय हिंसा पनि जारी नै छ । उनी थप्छिन्, “दलित महिलालाई लैंगिक हिंसा माथि जातीय हिंसा हुन्छ । त्यसैले उत्पीडनको पिंधमा दलित महिला हुन्छन् ।”
दुर्गालाई जातीय उत्पीडनको समाधान राजनीति हो भन्ने लागेको छ । त्यसैले उनी सामाजिक क्षेत्रबाट अलग भएर राजनीतिक दलमा सक्रिय भएकी छन् । बाबुराम भट्टराईको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीमा सहसंयोजक रहेकी दुर्गाले राजनीतिमा पनि जातीय हिंसा सहनु परेको अनुभव गरेकी छन् । “मैले क्षमता र योग्यताबाट त्यो स्थान पाएँ, तर महिला त्यसमा पनि दलितले नेतृत्वदायी ठाउँमा बस्नु हुन्न भन्ने दबाब आउन थाल्यो होला, अन्ततः त्यो पद नै खारेज गरियो” दुर्गा भन्छिन्, “सहसंयोजकको पद खारेजीपछि म उपाध्यक्ष वा महासचिवसम्म बन्नुपथ्र्यो, तर मलाई सचिवमा झारियो ।”
दुर्गा अहिले जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छिन् । तर, उनलाई यो पार्टीमा अधिकतम सचिव भन्दा माथिल्लो पदमा पुगिएला भन्ने आशा छैन । भन्छिन्, “प्रत्यक्ष विभेद हुँदा तत्काल प्रतिकार गर्न सकिन्छ, तर अप्रत्यक्ष विभेद सहन पनि गाह्रो, प्रतिकार गर्न पनि गाह्रो ।”
पाइला पाइलामा विभेद
सर्लाहीमा ब्राह्मण बुवा र दलित आमाबाट जन्मेका गायक यशकुमार १० वर्षको हुँदा आमाबुवासहित काठमाडौं आए, गौशालामा हुर्किए । सर्लाहीमा बस्दा सानै भएकोले उनले जातीय छुवाछूत भोग्नु परेन । काठमाडौं आएपछि पनि विभेद झेल्नु परेन । किनभने विद्यालय हुँदा उनको थर नेपाल लेखियो । नागरिकता बनाउँदा चाहिं यशकुमारले परियार थपे । यशकुमार जब गायकको रूपमा स्थापित भए, जातका आधारमा उनीमाथि विभेद शुरू भयो । कतिसम्म भने यशकुमारको ‘मैले छोएको पानी चल्दैन’ भन्ने गीत चर्चित रहेकै बेला उनले तीतो पीडा भोगे । “मेरो असाध्यै मिल्ने साथीको बहिनीको विवाह थियो, उसले कार्ड दिएर भन्यो– यो औपचारिकताको लागि मात्रै दिएको है, आउनलाई होइन, सरी । म त जातपात मान्दिनँ तर आमाबुवा हुनुहुन्छ, बरु हामी पछि रमाइलो गरौंला नि ! भन्यो । त्यो कुराले मेरो मुटुमा घोच्यो”, यशकुमार सम्झन्छन् ।
‘मैले छोएको पानी चल्दैन’ गीतले यशकुमार सबैतिर चिनिए । काठमाडौं घर भएका आचार्य थरका उनको साथीका बुवाले एक दिन छोरालाई सोधेछन्, “तेरो साथीले पानी चल्दैन भन्ने गीत त गायो, ऊ आफैं चाहिं पानी चल्ने कि नचल्ने पर्‍यों ?”
एकपल्ट कन्सर्टका लागि उनी लण्डन पुगेका थिए । त्यहाँ एकजना चिनेका दाजुले खाना खान बोलाएका रहेछन् । खाना खाइसकेपछि ती दाजु काममा जान कपडा फेर्दै थिए । “भाउजुले प्वाक्क भन्नुभो– यो कपडामा त हजुर दलित जस्तै देखिनुहुन्छ । त्यो सुनेपछि असाध्यै पीडाबोध भयो, केही बोल्नै सकिनँ” उनले थपे, “उहाँको हुर्काइ नै त्यसैगरी भयो होला । बेलायत पुगेर पनि जातीय विभेद र हिंसा गर्ने मानसिकता नबदलिएको देखें ।”
लोडसेडिङताकाको अर्को तीतो अनुभव छ यशकुमारसँग । रेकर्डिङ स्टुडियोमा काम नहुने भएकाले उनीहरू स्टुडियोमै बरालिएर बस्थे । एक दिन खाजा लिन जाने पालो चल्तीका एक गीतकारको थियो । खाजा लिन उनलाई पैसा दिने एक जनाले भने– ‘बचेको फिर्ता ल्याऊ है भाइ !’ “त्यो भाइले म (जातीय अपमान गर्ने शब्द) हो र फिर्ता आएको पैसा खाने भन्यो । मैले उसको कुरामा आपत्ति जनाएपछि भन्यो– सरी दाइ, मैले त यहाँ तपाईं हुनुहुन्छ भनेर याद नै गरिनछु” यशकुमार भन्छन्, “यस्ता खालका अपमान त कति भोग्नुपर्छ कति ।”
गायकपछि यशकुमार सिनेमाको नायक पनि बने । सिनेमा थियो– बाटो मुनिको फूल । त्यसको सूटिङका बेला केही शुभचिन्तकहरू सेटमै आइपुगे । छिटो सूटिङ सक्नुपर्ने र आफ्नै शटको पालो भएकाले उनले समय दिन भ्याएनन् । यशकुमार सम्झन्छन्, “उहाँहरूले अर्का नायक बाबु बोगटीसँग तस्वीर खिच्नुभो र भन्नुभो– अलिकति प्रगति गरेपछि ठूलो पल्टिन्छ, जात जनाइहाल्यो ।”
यशकुमारले झेलेका जातीय हिंसा र विभेदका घटना कति कति । एकपटक काठमाडौंमा नाम चलेकी एक महिला कलाकारले भनिन्, “तपाईं त अरू दलितभन्दा फरक हुनुहुन्छ । सोच्ने, बोल्ने शैली फरक छ । पक्कै पनि ‘मिक्स’ भएर यस्तो हुनुभएको होला !”
“प्रत्यक्ष विभेद भोग्दा त म तुरुन्तै प्रतिवाद गरिहाल्छु” यशकुमार भन्छन्, “तर अप्रत्यक्ष अपमान चाहिं सामना गर्न पनि गाह्रो, प्रतिवाद गर्न झन् गाह्रो । चेतनशील र पढेलेखेका मानिस भएको शहरमा यस्तो विभेद भोग्नु पर्दा ज्यादै दुःख लाग्छ ।”
बहुरंगीसँग लड्न गाह्रो
विद्यार्थी नेतृ रेखा परियारले काठमाडौंमा जातीय विभेद मात्र झेलेकी छैनन्, भौतिक आक्रमणमै परेकी छन् । चितवनमा जन्मेकी रेखाले गाउँमा आम दलितमाथि हुने छुवाछूत भोगिन् । एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि उनी परिवारसहित काठमाडौं आएर चुनिखेलस्थित गाम्चामा बस्न थालिन् । गाम्चाको नेवार वस्तीमा आएपछि रेखा र उनको परिवारमाथि जातका आधारमा फरक व्यवहार हुन थाल्यो । सार्वजनिक धारामा पानी थाप्न नदिने, कथित उपल्लो जातकाले पानी भरेपछि धारा बन्द, चियापसलमा पस्न नदिने जस्ता हिंसा सामान्य हुन थाले ।
रेखा परियार, विद्यार्थी नेतृ
रेखाका बुवा र दाजुले सिलाई पसल खोलेका थिए । १९ चैत २०६९ मा पसलका लागि उनीहरूले स्थानीयकै गाडीमा सिलाई मेसिन र केही सामान ल्याए । तर, गाडीवालाले शुरूमा कबोलेको भन्दा बढी भाडा माग्यो । भनाभन हुँदा वरपरको ठूलो समूह आएर रेखाको परिवारलाई नै मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गर्‍यों । जातीय आधारमा तथानाम गालीगलौज गरियो ।
यो खबर पाएपछि ढिलोगरी घटनास्थल पुगेको प्रहरीले रेखाको परिवारलाई नै अस्पताल पु¥यायो । उनीसहित बुवा र आमाको करीब तीन साता वीर अस्पतालमा उपचार गर्नु पर्‍यों । घटना २० चैत २०६९ मा महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जमा उजुरी गर्न जाँदा प्रहरीले रेखाको उजुरी नै लिन मानेन । तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई गुहारेपछि १० दिनपछि प्रहरीले बल्ल गाम्चा घटनाका पाँच अभियुक्त विरुद्घ किटानी जाहेरी लियो, तर उनीहरूलाई प्रहरीले ‘फरार’को सूचीमा राख्यो । ती ‘फरार’ अभियुक्तहरू कहिल्यै पक्राउ परेनन् ।
घटनापछि गाम्चामा बस्न नसकेर १० वैशाख २०७० मा रेखाको परिवार प्रहरीकै सहयोगमा नारायणथान मिलनचोक स¥यो । सञ्चारमाध्यममा जातीय विभेदको कारण विना कसुर एउटा दलित परिवारमाथि समाजले अत्याचार गरेको समाचार छायो । विडम्बना दोषीलाई कारबाही भएन । दलित नेताहरूमार्फत दबाब दिएर उल्टै मिल्न लगाइयो । रेखा भन्छिन्, “ज्यानभन्दा ठूलो केही होइन भनेर मिल्नु पर्‍यों ।”
गाम्चा घटनाले ठूलो मानसिक आघात व्यहोरेकी रेखा वैदेशिक रोजगारीमा स्पेन पुगिन् । करीब १३ महीना काम गरेर फर्किन् । छुटेको स्नातक तहको पढाइलाई निरन्तरता दिइन् । त्यहीक्रममा राजनीतिमा लागिन् । र, नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशनबाट अत्यधिक मत ल्याएर केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भइन् ।
केन्द्रीय सदस्य भएपछि उनी जातीय विभेद विरुद्घ भाषण गर्थिन्, संगठनका साथीहरू ताली बजाउँथे । तर रेखाको जीवनमा उनीहरू नै बिझाउने व्यवहार गर्न थाले । राजनीतिक दौडधुपमा सँगै खाना खानेहरू घर गएपछि भने उनलाई भान्सामा छिर्न दिंदैनथे । “एकपल्ट हाम्रै संगठनका एकजना साथीको डेरा सर्दा सबै मिलेर सामान ओसा¥यौं, सामान मिलाइदियौं, अन्तिममा खाना पकाएर खाने बेलामा मलाई अलग गरे” रेखा भन्छिन्, “त्यो घटनाले मलाई साह्रै चोट पुग्यो ।” रेखा भन्छिन्, “शहरका यस्ता ‘बहुरंगी सभ्य’ सँग लड्न झन् गाह्रो रहेछ ।”
शहर: झन् असहिष्णु
बाग्लुङ नगरपालिका–१० मा जन्मेका गायक, गीतकार तथा संगीतकार बीबी अनुरागीले गाउँमै हुँदा जातीय हिंसा र विभेद भोगेका थिए । एसएलसीपछि पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पस भर्ना भएपछि त गाउँको भन्दा चर्को विभेद सामना गर्नुपर्‍यों ।
शुरूमा क्याम्पसको होस्टलमा बस्न गए उनी । त्यहाँ जातकै विषयमा दुई जनासँग झगडा पर्‍यों । हानाहान भयो । तर, उनलाई त्यो घटना ठूलो लागेन किनभने उनले त्योभन्दा चरम विभेद, दुव्र्यवहार भोगिसकेका थिए । होस्टलबाट निस्केपछि कोठा खोज्न धेरै भौंतारिनु पर्‍यों । डेरा पाउन मुश्किल थियो । अनेक ठाउँ भौंतारिए । कतै नपाएपछि गाउँबाट आएका दुई जना साथीको डेरामा मिलेर बसे । त्यतिञ्जेल उनले गजल रेस्टुराँमा गाउन थालिसकेका थिए ।
साथीहरूसँग बस्दा जातकै कारण उनलाई सहज भएन । साथीहरूका आमाबुवा गाउँबाट आउँदा बढी समस्या हुन्थ्यो । त्यो समस्याबाट मुक्ति पाउन उनी फेरि कोठाको खोजीमा भौंतारिन्थे । बल्ल बल्ल एउटा कोठा पाए । भाइबैनी पोखरा आएपछि फेरि नयाँ ठाउँमा कोठा सर्नुपर्‍यों । त्यही क्रममा पोखराको बगाले टोलस्थित एकजना गुरुङको घरमा सरेको दुई दिनपछि धारामा पानी आउन बन्द भयो । एक दुई दिनसम्म घरधनीले पानी नै नआएको जवाफ दिए । धेरै दिन पानी नआएपछि एक दिन उनी घरधनी बस्ने माथिल्लो तलामा जाँदा पानी आइरहेको थियो ।
उनले घरधनीलाई सोधे– “अस्ति पानीको अभाव छैन भन्नुभएको थियो, हामीले के गल्ती गर्‍यौं र ?” बीबी सम्झन्छन्, “पानी नआएको होइन । तिम्रो जात पहिल्यै थाहा पाएको भए कोठा दिने थिइनँ भने, त्यसपछि फेरि डेरा सर्नुपर्‍यों ।”
धन्न भोलिपल्टै उनले एउटा कोठा र भान्सा भएको डेरा पाए । त्यो घरमा केही दिन राम्रै व्यवहार भयो । तर, जात थाहा पाएपछि फेरि उस्तै दुव्र्यवहार र हिंसा । सीधै घरबाट निस्की नभने पनि निस्कियोस् भने जस्तो व्यवहार हुन्थ्यो । त्यहाँ पनि घरबेटीले एक महीनामा कोठा छाड्नुपर्ने समय नै तोकिदिए ।
त्यसपछि फेरि शुरू भो डेरा खोज्ने नयाँ उपक्रम । पालिखे चोक नजिकै बन्दै गरेको घर । घरमुली नेवार समुदायकी एक महिला थिइन् । पाँच कोठा खाली थिए । उनले आफू विश्वकर्मा भएको बताए । बीबी भन्छन्, “उहाँले जातले केही फरक पर्दैन बाबु, इमानदार भए हुन्छ भन्नुभो । त्यसपछि पोखरा बसुञ्जेल हामी त्यही घरमा बस्यौं ।”
२०६० मा उनी काठमाडौं आए । गायक, संगीतकार तथा निर्देशक नारायण रायमाझीले आफ्नै रिमा रेकर्डिङ स्टुडियोमा जागिर दिने भनेर उनलाई बोलाएका थिए । डेरा रायमाझीले नै खोजिदिए । तर, काठमाडौं आएपछि उनले पोखराको भन्दा भिन्न विभेद भोग्न थाले । “सीधै जातपातको कुरा नगर्ने तर घुमाएर विभेद गरिरहने ।” बीबी भन्छन्, “यस्तो विभेद, जसबाट आफ्नो अपमान भइरहेको थाहा हुन्छ, तर प्रतिकार गर्न सकिंदो रहेनछ ।”
सोना खटिक, स्टेसन मेनेजर
सरकारी कार्यालयमा जाँदा उनलाई बीबी अनुरागी भनेर चिनिरहेकाले पनि नाम बलबहादुर विश्वकर्मा हो भनेपछि बोल्ने शैली नै फेर्थे । “अहिले पनि काठमाडौंमा कहिलेकाहीं यति तुच्छ व्यवहार हुन्छ कि न सहन सकिन्छ न प्रतिकार गर्न” उनी भन्छन्, “छरछिमेकमा सबै परिवार जस्तै भएर बसेका छौं तर जब पूजालगायतका धार्मिक र सांस्कृतिक कार्यक्रम हुन्छन्, सकेसम्म हामीलाई बोलाइन्न, बोलाइहाले हामी अलग बस्नुपर्छ ।”
बीबीलाई ठूलो पीडा चाहिं अरू बेला विभेद नगर्ने साथीहरूले गाउँबाट आमाबुवा आउनासाथ विभेद गर्न थालेपछि हुने रहेछ । भन्छन्, “म गीतकार हुँ, पीडालाई गीतमा उतार्ने प्रयास गर्छु । गायक हुँ त्यसमा स्वर पनि दिन्छु । तर, काठमाडौं न हो, त्यसलाई गीतमै सीमित गरिदिन्छ ।”
आफ्नै संघर्षले रेडियो कपिलवस्तुको स्टेसन मेनेजर बनेकी पत्रकार सोना खटिक जातीय विभेद भोग्दै हुर्किइन् । उनले झेलेको जातीय हिंसा अरूको भन्दा गम्भीर छ । किनभने मधेशका दलितमाथि पहाडमा भन्दा बढी जातीय ज्यादती हुन्छ ।
रेडियोमा कार्यालय सहयोगीबाट सेवा शुरू गरेकी उनी स्टेसन मेनेजर भए पनि कार्यालयमा भन्दा समुदायमा पुगेर काम गर्न रुचाउँछिन् । सोना भन्छिन्, “सर्वसाधारण कहाँ जाँदा समस्या हुन्न, तर शक्ति र पदमा हुनेको अन्तर्वार्ता लिन जाँदा जसको अन्तर्वार्ता लिनुपर्ने हो, उसैलाई लामो अन्तर्वार्ता दिनुपर्छ ।”
सोनाका भनाइमा ‘एकछिन पहिलेसम्म एकखाले व्यवहार गरिरहेका व्यक्तिले जब मेरो थर थाहा पाउँछ, उसको व्यवहार बदलिन्छ । दलित भन्ने थाहा पाएपछि उनीहरूको सम्बोधन तिमीमा झर्छ ।’
२०६९ सालमा उनी कपिलवस्तुको एउटा सरकारी कार्यालयका प्रमुखको अन्तर्वार्ता लिन गएकी थिइन् । ती कार्यालय प्रमुखले उनलाई बस्न समेत भनेनछन् । उनले सीधै बस्न आएको कि अन्तर्वार्ता लिन आएको भनेछन् । सोना भन्छिन्, “आफ्नो कार्यकक्षको सोफामा दलित केटी नबसिदेओस् भन्ने आशयले बस्न नभनेको जस्तो लाग्यो । त्यसले पनि मैले बसेरै अन्तर्वार्ता लिनुपर्छ भनेर बसेर कुरा गरें ।” शुरू शुरूमा उनले धेरै अन्तर्वार्ता उभिएरै लिएकी छिन् ।
होली सार्की, ट्रेकिङ व्यवसायी
सोनाको बुझाइमा जातीय विभेद कानूनी रूपमा समेत दण्डनीय भएकाले अचेल दलितलाई प्रत्यक्ष हिंसा गर्न छाडिए पनि समाजमा प्रतिष्ठा कमाएका र पढेलेखेकाले नै अप्रत्यक्ष विभेद र अपमान गर्ने गरेका छन् । “मैले समाचार खोज्न वा अन्तर्वार्ता लिन जाँदा पहिले मेरो जात, आमाबुवाको पेशा र अनि यो पदमा म कसरी पुगें भन्ने बताउनु परेको छ । कतिपयले आमा गैरदलित होला हैन, त्यही भएर तपाईं क्षमतावान हुनुभयो भन्न समेत भ्याउँछन् ।” सोनाको कथन छ । बेला बेला मिल्ने साथीले समेत जातीय विभेद गर्दा मन दुख्ने गरेको छ उनलाई । भन्छिन्, “एक जना मिल्ने साथी मेरो घरमा आउँदा सँगै बसेर खाने तर उनको घर जाँदा भान्सामा जान नदिएपछि उनको घर जानै छाडिदिएँ ।”
“यसरी हुने विभेदको चाहिं प्रतिकार गर्न पनि नसकिने रहेछ” पत्रकारितामा स्नातकोत्तर गरेकी, देश–विदेशका तालिम लिएकी सोना भन्छिन्, “कार्यक्रममा बोलाउने, समान हैसियतका गैरदलितलाई एकखालको सम्मान दिने, मलाई वास्तै नगर्ने गर्छन् ।” आफूले पनि त्यसको प्रतिवाद गर्न थालेको बताउँदै उनले त्यस्ता कार्यक्रममा जान छाडिदिएको बताइन् ।” सोनाले भनिन् “अप्रत्यक्ष रूपमा गरिने विभेदको प्रतिकार म पनि अप्रत्यक्ष रूपमै गर्छु ।”
नेदरल्याण्डमा पनि विभेद
विकसित देश पुगेका नेपालीमाझ समेत जातका आधारमा विभेद र भेदभाव अचाक्ली छ । होली नेपाली त्यसको एक भुक्तभोगी हुन् । नेदरल्यान्ड्समा टप अफ दी वल्र्ड नामको ट्रेकिङ एजेन्सी चलाइरहेकी होली कास्कीको लेखनाथ पचघैया गाउँमा जन्मिएकी थिइन् ।
ट्रेकिङ व्यवसायी राजीव श्रेष्ठको सहयोगमा उनले पोखरा र काठमाडौंमा पढ्न पाइन् । राजीवको परिवारकै सदस्य जस्तो भएर बसेकाले उनलाई अरूले हेप्न सक्दैनथे । कसैले थर सोधेमा उनी सार्की हुँ भन्थिन् । होली भन्छिन्, “कतिले सार्की भएर पनि कति राम्री भन्थे ।”
२०५९ सालमा एसएलसी सकेपछि राजीवकै ट्रेकिङ एजेन्सी वे फेयर्स हिमालयन जर्नी मा काम गर्ने क्रममा डच नागरिक थोमस टिरोलोफसँग भेट भयो । मन मिलेपछि थोमससँगै उनले विवाह गरिन् र सन् २०१२ मा नेदरल्यान्ड्स पुगिन् । “यहाँ पनि जातका आधारमा नेपालीबाटै भेदभाव हुन्छ” होली भन्छिन्, “एक जना क्षेत्री बहिनी हुनुहुन्छ, हामी एकदमै मिल्छौं । तर, उहाँका आफन्तले सार्कीसँग किन संगत गरेको भन्दा रहेछन् ।”
नेदरल्याण्ड्समा नेपाली समुदायको बेलाबेला जमघट भइरहन्छ । त्यसक्रममा कतिपयले ‘बिहे चाहिं मिल्ने जातसँग मात्र गर्नुपर्छ’ भनेको उनले कैयौंपटक सुनेकी छिन् । होली भन्छिन्, “जति पढे पनि, जतिसुकै देश–विदेश देखे पनि मान्छे मान्छे बन्न सक्दो रहेनछ ।”
दलित महिला संघ (फेडो) की उपाध्यक्ष शान्ति पासवान मधेशी समाजमा जन्मे, हुर्के पनि उनले गाउँमा खासै विभेद सहनु परेको थिएन । किनभने शान्तिको घर सिरहा नगरपालिका वडा नम्बर ३ तामाङ बाहुल्य गाउँमा छ ।
उनले गाउँमा खासै विभेद खेपेकी थिइनन् । तर, सामाजिक क्षेत्रमा लागेपछि भने उनले पाइला पाइलामा जातीय विभेद भोगिन् । आठ वर्षअघि २०६९ सालमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चुनावको बेला उनलाई जातकै कारण उम्मेदवार हुन दिइएन । चुनावमा उनले जित्ने सम्भावना भएपछि उनलाई उठ्न नदिन डर, धम्की देखाइयो । उनी भन्छिन्, “अचाक्ली भएपछि अध्यक्ष भएर के नै हुने हो र भनेर छोडिदिएँ ।”
छुवाछूत दण्डनीय भएकाले कसैले पनि प्रत्यक्ष विभेद नगर्ने तर पढेलेखेका र जानेबुझेकाले अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो अपमान गर्ने शान्तिको बुझाइ छ । उनी भन्छिन्, “सीधै भन्दैनन् तर कोही नराम्रो मान्छे देख्यो भने, कसैले तल्लो स्तरको शब्द बोल्यो भने कस्तो दलित जस्तो भन्छन् । कसैको घरमा चोरी भयो भने शंकाको घेरामा पहिला दलित समुदाय नै पर्छ ।”
विभेद विरुद्ध लड्ने शान्तिको आफ्नै शैली छ । उनी भन्छिन्, “कतिपय नपढेका, नबुझेका मानिसले विभेद गरे त्यही रूपमा लिन्छु । तर पढेलेखेका र बुझेकाहरूले प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष विभेद गरे भने चाहिं म पनि कडा रूपमा प्रस्तुत हुन्छु ।”
बाग्लुङको बलेवाचौर नारायणस्थानमा जन्मेका भुवनसिंह विश्वकर्माले अन्टार्टिका पुग्ने नेपालीको कीर्तिमान रचेका छन् । ८ वर्षको उमेरमा भारतको गोरखपुर झरेका र पछि भारतीय सेनामा भर्ती भएर जीवनको लामो कालखण्ड भारतमै बिताएका भुवनसिंहले उता हुँदा जातका आधारमा खासै विभेद भोग्नु परेन ।
तर, अवकाशपछि नेपाल फर्केपछि भने उनले जातीय विभेद भोग्नु पर्‍यों । “पहिला पढेलेखेकाले पनि जातकै आधारमा विभेद गर्थे, अहिले विभेदको स्वरुप बदलिएको छ” विश्वकर्मा भन्छन्, “कानूनले जातीय विभेद अपराध हो भनेको छ त्यसैले प्रत्यक्ष रूपमा हुने विभेद घटेको छ । तर, शहर–बजारमा दलित समुदायले फरक खालको जातीय हिंसा भोगिरहेका छन् । जसको प्रतिकार गर्न पनि सजिलो हुन्न ।”
हाल बुटवल निवासी भुवनसिंहले भोगेको अप्रत्यक्ष विभेद कस्तो छ त ? उनको शब्दमा ‘अरूबेला एकदमै आत्मीयता देखाउने, सँगै हिंड्ने साथीहरू खाने बेलामा अचम्मसँग टाढिने गर्छन् ।
एक पटकको अनुभव, सधैं चिया पिउने एकजना मित्र मैले छोइदिएकै कारण आज चिया पिउन मन छैन भनेर उठेर हिंडे ।’ उनका अनुसार, सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदा आफू सँगै भए खाना खानेबेला कतिपय साथीले आफू घरैमा खाएर आएको भन्दै पन्सिन्छन् ।
भुवन थप्छन्, “त्यो मेरै कारणले हो भन्ने म बुझ्थें, तर कसरी प्रतिकार गर्ने ? मिल्ने साथीभाइका घरमा विवाह, ब्रतबन्ध जस्ता कार्यक्रम हुँदा छिमेकीलाई निम्ता गर्ने, म त्यसमा नपर्ने । मनमा बिझ्छ नि !”
इन्जिनियरलाई पनि छाडिएन
पूर्णलाल विश्वकर्मा, इन्जिनियर
समाजको चेतनास्तर र सामाजिक संरचना नै यस्तो छ कि पद, प्रतिष्ठा र आर्थिक हैसियत मात्रले पनि विभेद नरोकिंदो रहेछ । इन्जिनियर पूर्णलाल विश्वकर्मा यसको एउटा भुक्तभोगी हुन् ।
पर्वतको कुश्मा नगरपालिकाका पूर्णलाल विश्वकर्माले गाउँमा प्रत्यक्ष विभेद खासै सहनुपरेन । उनी हुर्केको बस्तीमा दलित समुदाय मात्रै थिए । त्यति मात्र होइन, एसएलसी उत्तीर्ण गरेर इन्जिनियरिङ पढ्न काठमाडौं आएपछि पनि उनले खासै विभेदको सामना गर्नुपरेन ।
तर, पढाइ सकेर उनले जब लोक सेवा आयोगमा नाम निकाले, त्यसपछि शुरू भयो विभेदको शृंखला । ६ असोज २०३९ मा उनको पहिलो पदस्थापन चितवन भरतपुरस्थित सिंचाइ कार्यालयमा भएको थियो । जागिर शुरू भएपछि चितवन, बैतडी, जाजरकोट, रूपन्देही, धनुषा, तनहुँ, बर्दिया, कपिलवस्तुलगायत जिल्ला पुग्दा उनले सबैभन्दा बढी बैतडीमा विभेद झेले । त्यहाँ त कार्यालयमा उनी मातहतका कर्मचारीले पनि विभेद गर्थे । उनी भन्छन्, “डेरा खोजेर बस्नुपरेको भए के हालत हुन्थ्यो होला, धन्न क्वार्टरमा बस्न पाएकोले समस्या भएन ।”
त्यसबेला आफ्नो नजिकको साथीले गरेको विभेद उनी अहिले पनि सम्झन्छन् । चितवनमा जागिर खाँदाको बेला सँगै काम गर्ने एउटा साथीको बिहे हुने भयो । कार्यालयका अरूले जन्ती जान र भोजमा आउने निम्ता पाए । तर पूर्णलाललाई भने भोजमा मात्रै बोलाइयो । थाहा पाउने गरी भएको यो विभेदले उनलाई गहिरो चोट पु¥यायो, उनी भोजमा पनि गएनन् ।
पूर्णलाल भन्छन्, “तपाईं सम्बोधन गरेर कुराकानी गरिरहेकाहरू जात थाहा पाएपछि तिमीमा ओर्लन्छन् । कतिले तँ नै भन्न बेर लाउँदैनन् ।” एक पटक त्यस्तै भयो । गाउँकै एक भाइसँग बसमा यात्रा गरिरहेका थिए उनी । सँगैको सिटमा एक पाका व्यक्ति तपाईं सम्बोधन गरेर कुरा गरिरहेका थिए । जब पूर्णलालले आफ्नो परिचय दिए । उनले तुरुन्तै भने, “ए, तँ फलानोको छोरो पो होस् !”
पूर्ण नेपाली, सहप्राध्यापक काठमाडौं विश्वविद्यालय
एउटै जगको पानी चलेन
काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक पूर्ण नेपाली भारतमा जन्मिए र कपिलवस्तुमा हुर्किए । गाउँमा उनको भोगाइ दलित समुदायका अरू व्यक्तिको जस्तै छ । उनी पनि समाजमा छुवाछूत, अपमान, धारापानीमा छुवाछूत, बोलीचालीमा गाली जस्ता विभेदसँग पौंठेजोरी खेल्दै हुर्किए ।
उनी जब काठमाडौंमा आएर पेशामा स्थापित भए, त्यसपछि उनले विभेदका अरू रूप पनि सामना गर्नुपर्‍यों। २०६० सालमा पूर्ण नेपाली संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) अन्तर्गतको ‘मेनस्ट्रिमिङ जेन्डर ईक्विटी प्रोजेक्ट’ को जिल्ला प्रमुख भएका थिए, म्याग्दीस्थित कार्यालयबाट काम शुरू गरेका उनले आफ्नै सहकर्मीले गरेको जातीय हिंसा भोगे ।
केही सहकर्मीहरू केसम्म गर्थे भने पूर्णले छोएको जगबाट पानी पनि पिउँदैनथे । “बोलेर ममाथि कुनै विभेद भएन, तर व्यवहारमा नराम्रो गरी अपमानित गरिन्थ्यो” पूर्ण भन्छन्, “त्यस्तो विभेदले मलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा धेरै नै असर गर्‍यों ।”
पूर्ण २०६५ सालमा पीएचडी अनुसन्धानको सिलसिलामा बझाङ र डोटी गएका थिए । त्यहाँ बास नै नपाउने अवस्था आयो । उनी भन्छन्, “दलितको घरमा बास माग्दा बाहिरबाट गएका पाहुनालाई मान गर्न सक्दैनौं भने, गैर दलितले त दलित भएका कारण बास दिनै मानेनन् ।”
समाजमा दलितहरूप्रति प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गरिने विभेद अन्त्यका लागि के गर्नु पर्ला ? “हामीसँग कानूनी उपचारको बाटो छ । जातको कारण प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष विभेद गर्नेलाई सजायको भागिदार बनाउनुपर्छ” उनी भन्छन्, “जातीय विभेद न्यूनीकरण गर्ने उपाय नै शून्य सहनशीलता हो ।”
खोज पत्रकारिता केन्द्रबाट
वडा अध्यक्षको कार्यकक्ष ढोका अगाडी वडा कार्यालयको बोर्ड
२०७७ आश्विन १६, शुक्रबार १३:५२
नेपालगंज । सामाजिक सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता लगायतका विभिन्न बिषयलाई ध्यान दिने हो भने, सरकारी कार्यालयका बोर्ड, नागरिक वडा पत्र, सूचना पाटी, सुझाव पेटिकाहरु जस्ता कुराहरु सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नु पर्छ । ताकी सबैले सहज जानकारी प्राप्त गर्न सकुन । तर बाँकेको नेपालगंज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २३ को वडा कार्यालयले भने […]
२०७७ कार्तिक १, शनिबार १६:५०
भोकमरीको सूचिमा नेपाल ७३ औं स्थानमा
२०७७ आश्विन २०, मंगलवार १३:१८
बाँके जिप्रका हाता भित्र अमर प्रहरी स्मारक बन्दै
२०७७ भाद्र ३०, मंगलवार १३:५४
व्यवसायिक कर सेवा तथा परामर्श केन्द्र संचालन
२०७७ आश्विन २, शुक्रबार ०६:४८
२०७७ भाद्र ८, सोमबार १५:३९
आयात १९.६ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात ८.८६ प्रतिशतले बढ्यो